Google Partners neRaspberry Pi Kutanga iyo Virtual Mubatsiri | Mahara emahara
Google Partners neRaspberry Pi kuvhura Virtual Mubatsiri
Vazhinji vedu tatova nemidziyo yekuchenjera mudzimba medu iyo inodzora zvimwe zvese zvishandiso mumba. Zvinonhuwira zveAmazon Echo kana Google Imba asi zvakasarudzika. Vamwe vanosarudza kutenga yavo kifaa kubva kuAmazon kana Google. Nekudaro izvozvi pane imwezve mukana, yepamutemo, yakagadziriswa uye yemahara mukana.
Google yakabatana Raspberry Pi mukugadzira Mahara Hardware mapurojekiti. Nekudaro, ivo vakagadzira imba chaiyo mubatsiri iyo yatinogona kuzvivakira isu asi iyo ichave nehunyanzvi hweGoogle neRaspberry Pi.
Uyu virtual mubatsiri yakanzi VoiceKit kana zvirinani seizvi inonzi webhu iyo yatichawana ruzivo rwese rwechigadzirwa. Ichi chishandiso zvinoshamisa chinogona kutengwa kuburikidza nemagazini yazvino yeMagPi.
VoiceKit ndiyo yekutanga yemahara yemubatsiri yakasikwa pamwe chete pakati peGoogle neRaspberry Pi
Magazini ino inogadzirwa neRaspberry Pi Foundation uye mune yekupedzisira nyaya yakavakirwa kit yemubatsiri uyu, inosanganisira zvinhu zvakaita sePi Zero W bhodhi, maspika, nezvimwe… Zvakare mushandisi iwe uchave unokwanisa kushandisa Google software kuti uve neanoshanda ari virtual mubatsiri uye pasina matambudziko.
Panguva ino, kuburikidza nemagazini ndiyo chete nzira yekuwana ino chaiyo mubatsiri kit. Asi ichi chinhu chakatoitika pamwe nebhodhi rePi Zero uye mwedzi yakati gare gare takatanga kuzviwana muzvitoro zveHardware Libre. Kune rimwe divi Google yakasimbisa izvozvo Iyi chaiyo mubatsiri kit haizove iyo chete chinhu chandinotanga pamwe chete ne Raspberry Pi. Kufarira kwavo bhodhi ndekwechokwadi uye ivo vacharamba vachivhura mapurojekiti epamutemo neGoogle software uye Raspberry Pi Hardware.
Chokwadi ndechekuti Iyo MagPi inonetsa kusvika kumaSpanish kiosks asi zvakare ichokwadi kuti kuve neFree Hardware uye Mahara Software, Tinogona kuvaka iyi chaiyo mubatsiri pachedu Hapana dambudziko, hongu, isu tinofanirwa kunge tiri murume anobatsira nekuti isu tinofanirwa kutanga tagadzira kit.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Google Partners neRaspberry Pi kuvhura Virtual Mubatsiri
Daniel boom akadaro
Izvo zvakafanana kusvikira vavhura inoshanda Android ye raspberry pi.
Pindura kuna Daniel Bum
Ndinokurudzira kujoina rasipibheri neShumba 2. Ino encode zvirinani uye inokatyamadza mhedzisiro mu3D kudhindwa
Google Mubatsiri anouya Mahara Hardware nekuda kwayo SDK
Edgybees anovandudza ako drone ekutyaira hunyanzvi neiyo yakapusa 'mutambo'